Mhlawumbe kungenxa yemithetho yokuphatha Kwami ukuthi abantu “bawathandile” amazwi Ami. Ukuba abengabuswa yizinqumo Zami zokuphatha, wonke abezoba ngukukliwula okufana nokwezingwe eziqeda kuphazanyiswa. Nsuku zonke ngizulazula phezu kwamafu, ngibuka isintu esemboze umhlaba siphithizela, sibekelwe imikhawulo Yimi ngezinqumo Zami zokuphatha. Ngale ndlela isintu sigcineka sisesimeni esihlelekile, ngakho ngiqhuba izinqumo Zami zokuphatha. Kusukela kulesi sikhathi kuya phambili, labo abasemhlabeni bemukela zonke izindlela zokusolwa ngokwezinqumo Zami zokuphatha, nalapho lokhu kusola kwehliselwa kubo sonke isintu siyamemeza sibalekele kuwo wonke amacala. Kulesi sikhathi, izizwe zomhlaba ziyashabalala masinya, imingcele phakathi kwezizwe nezizwe iyaphela, indawo kayehlukaniswa nenye indawo, akusekho lutho olwehlukanisa umuntu kumuntu. Ngiqala ukwenza “umsebenzi ngemibono” phakathi kwesintu, ukuze abantu bakwazi ukuhlalisana ngokuthula omunye nomunye, bengasalwi, futhi, ngengoba ngakha amabhuloho ngisungula ukuxhumana phakathi kwesintu, abantu bayabumbana. Ngizogcwalisa iphezulu lezulu ngokufinyelela komsebenzi Wami, ukuze konke emhlabeni kuwe ngaphansi kwamandla ami, kwethula isu Lami “lokubumbana komhlaba” futhi kuphumelelisa lesi sifiso Sami esisodwa, nokuthi ngalokho isintu singabe sisaba nakho “ukuzulazula” ebusweni bomhlaba kodwa sithole indawo yokuphelela ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngicabangela isintu ngazo zonke izindlela, ngenza ukuba sonke isintu masinyane sihlale ezweni lokuthula nenjabulo, ukuze izinsuku zokuphila kwaso zingabe zisaba nokudabuka kanye nosizi, ukuze ngalokho futhi isu Lami lingafinyeleli ekungabini yilutho emhlabeni. Ngenxa yokuthi umuntu ukhona lapho, ngizokwakha isizwe emhlabeni, ngokuba ingxenye yokuvela kwenkazimulo Yami ifikile emhlabeni. Ezulwini phezulu, ngizobeka amadolobha Ami esimeni esilungile futhi ngenze konke kube kusha phezulu naphansi. Ngizohlanganisa konke okukhona phezulu nangaphansi kwezulu kube kunye, ukuze zonke izinto ezisemhlabeni zibumbane nazo zonke ezisezulwini. Lolu wuhlelo lwami, yilokho engizokufeza ngenkathi yokugcina—makungabi khona ogxambukela kule ngxenye yomsebenzi wami! Ukwedluliselwa komsebenzi Wami kwabeZizwe yingxenye yokugcina yomsebenzi Wami emhlabeni. Akekho okwazi ukuqonda umsebenzi engizowenza, ngakho abantu badidekile ngokupheleleyo. Futhi ngoba ngimatasatasa ngomsebenzi Wami emhlabeni, abantu bathatha ithuba “balibale ukudlala.” Ukubenza bangadlebeleki kakhulu ngibafake ngaphansi kokusola Kwami ukuze babekezelele ukuyalwa ngechibi lomlilo. Lesi yisinyathelo esisodwa emsebenzini wami, futhi ngizosebenzisa amandla echibi lomlilo ukufeza lo msebenzi Wami, ngaphandle kwalokho bekungezukwenzeka ukuqhuba umsebenzi wami. Ngizokwenza abantu emkhathini wonke ukuba bazithobe phambi kwesihlalo sobukhosi, ngibehlukanisa ngezigaba ezehlukene ngokokwahlulela kwami, ngibahlela ngalezi zigaba, bese ngibahlunga ngemindeni yabo, ukuze isintu sonke siyeke ukungangilaleli, singene, esikhundleni salokho, ohlelweni olunobunono futhi olumiswe kahle ngokwezigaba esengizishilo — akungabikho ozulazula noma kanjani! Kuwo wonke umkhathi, ngilungisile umsebenzi omusha; kuwo wonke umkhathi, sonke isintu sethukile savaleka umlomo ngokuvela Kwami kungazelelwe, izimpelamehlo zabo zaqhuma ngendlela engakaze izwakale ngenxa yokuvela Kwami ngokuvulekile. Inamuhla ngabe kalifani ncimishi nalokhu?